ကမ္ဘာ့တစ်လွှား မတူညီသော နေရာဒေသများကြားမှ ကလေးများ၏ခြားနားမှုကို လူအများ မြင်သာအောင် မျက်စိဖွင့်ပေးခဲ့သည့် အနုပညာရှင်တစ်ဦး - ONE DAILY MEDIA
Uğur Gallenkuşဟာ အစ္စတန်ဘူလ် အခြေစိုက် ဒစ်ဂျစ်တယ် အနုပညာရှင် တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ၏ မတူညီသော အစိတ်အပိုင်းများကြား ခြားနားသော ဆန့်ကျင်ဘက်များကို ပြသရန် ကြေကွဲဖွယ်ရာ ဓာတ်ပုံများကို ဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။ ဤမတူကွဲပြားသော အဖြစ်မှန်များ၏ ပုံများကို ယှဉ်ကြည့်ခြင်းဖြင့်၊ ပန်းချီဆရာသည် ဆင်းရဲမွဲတေမှု၊ ငတ်မွတ်မှုနှင့် ကလေးကုန်ကူးမှုအပါအဝင် ယနေ့ခေတ်ကလေးများအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသော ပြဿနာအားလုံးကို ပြသရန် ရည်ရွယ်ပါတယ်။ မိဘတစ်ယောက်ဖြစ်ရခြင်းရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို နားလည်တဲ့အခါ အထူးသဖြင့် ကျွန်တော်တို့အားလုံး သတိပြုရမယ့်မေးခွန်းတစ်ခုက ” ငါတို့ ကမ္ဘာကြီးဟာ ကလေးတွေအတွက် ဘယ်လိုအမွေတွေချန်ထားခဲ့လဲ ?? ” ဆိုတာပါပဲ။
ဤမတရားမှုအားလုံးကိုမြင်ရခြင်းက Parallel Universes of Children အမည်ရှိ စာအုပ်တစ်အုပ်ထုတ်ဝေရန် Uğur ကိုလှုံ့ဆော်ခဲ့ပါတယ် ။ “ဒီစာအုပ်က ၁၉၉၀ ခုနှစ်ကတည်းက ပြဌာန်းထားတဲ့ ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂကွန်ဗင်းရှင်းကို အခြေခံအုတ်မြစ်အနေနဲ့ ယူထားပြီး ကလေးတစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ အခြေအနေနဲ့ ပထဝီဝင်အနေအထား ဘယ်လိုပဲရှိရှိ မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ အခွင့်အရေးတွေကို ဒီပုံပေါင်း 50 နဲ့ ဖော်ပြဖို့ ဖော်ပြဖို့ ရည်ရွယ်ထားပါတယ်” ဟု ပန်းချီဆရာက ရှင်းပြပါတယ် ။ “Collage တစ်ခုစီသည် UN မှသတ်မှတ်ထားသော ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးများထဲမှ တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ကလေးများအား အန္တရာယ်ဖြစ်စေသည့် အရေးပေါ်အခြေအနေများကို ညွှန်ပြသည့် ကိန်းဂဏန်းများဖြင့် တွဲထားပါတယ်။
Uğur က သူ၏စာအုပ်သည် ယနေ့ခေတ်ကလေးများအတွက် ကမ္ဘာကြီးကို ပိုမိုကောင်းမွန်သောနေရာတစ်ခုဖြစ်စေရန်အတွက် ၎င်းတို့၏လောဘနှင့် အတ္တကို ချန်ထားခဲ့ရန် ဖိတ်ခေါ်ကာ လူကြီးများ၏ အသိဉာဏ်ပြောင်းလဲမှုကို လှုံ့ဆော်ပေးလိမ့်မည်ဟု Uğur က မျှော်လင့်ပါတယ်။ “ဤစာအုပ်ဟာ ဆင်းရဲသော သို့မဟုတ် ချမ်းသာသော၊ ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံ သို့မဟုတ် မဖွံ့ဖြိုးသေးသောနိုင်ငံ၊ ပညာတတ် သို့မဟုတ် ပညာမတတ်၊ ဆာလောင်မွတ်သိပ်ခြင်း သို့မဟုတ် အဝလွန်သူ သို့မဟုတ် သေဆုံး သို့မဟုတ် အသက်ရှင်နေသေးသော ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ကလေးများအားလုံးအတွက် ရည်ရွယ်ထားခြင်းဖြစ်တယ်” ဟု ပန်းချီဆရာက ဆိုပါတယ်။ “This book isaCALL TO ACTION!”
(၁) ပညာမသင်မီ ဝမ်းရေးရှာရခြင်း
၎င်းမှာ အသက် 15 နှစ်အရွယ် လိင်အလုပ်သမ Shaila ဖြစ်ပါတယ်။ မိထွေး၏ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုကြောင့် သူမသည် အိမ်မှထွက်ပြေးပြီး ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ ဒါကာရှိ သူမ၏အဒေါ်ထံသို့ သွားရောက်ရန် ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ “ဒါကာကိုသွားမယ့် ဘတ်စ်ကားပေါ်မှာ ထိုင်ခုံရခဲ့ပါတယ်။ ကားအသွားအလာများလွန်းသောကြောင့် ဘတ်စ်ကားဟာ တစ်နေရာတည်းတွင် နာရီပေါင်းများစွာ ပိတ်မိနေခဲ့ပါတယ်။ ပိုမှောင်လာပြီး ဘာလုပ်ရမှန်းမသိတော့ဘူး။ ဘတ်စ်ကားပေါ်ကဆင်းတော့ သန်းခေါင်ကျော် ၁၂ နာရီလောက်ရှိပြီ။ ကျွန်မ အရမ်းကြောက်လွန်းလို့ ခရီးသည် အမျိုးသမီးတိုင်းကို ကျွန်မကို တစ်ညလောက် နားခိုခွင့်ပြုဖို့တောင်းဆိုတယ်။ ငိုပြီး ဘာလုပ်ရမှန်းမသိချိန် ဘယ်သူမှငါ့ကိုမယုံဘူး။ အဲဒီနေ့မှာ တစ်ယောက်ယောက်က ကျွန်မကို တစ်ညတည်း ခိုလှုံခွင့်ပေးမယ်ဆိုရင် ကျွန်မဘဝ ငရဲကျမှာ မဟုတ်ဘူး” ဟု သူမက ဆိုပါတယ် ခရီးစဉ်အတွင်း သူမကို လူတစ်စုက ပြန်ပေးဆွဲခဲ့ပြီး ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်း တစ်ခုကိုရောက်ရှိခဲ့ရပါတယ်။
အယ်ဒီတာ့အာဘော် ဓာတ်ပုံ- GMB Akash
(၂) Children Are Children First – Seesaw
Ain al-Arab ဟုလည်းလူသိများသော ဆီးရီးယားနိုင်ငံ Kobane တွင် ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရသော တင့်ကားတစ်စီးပေါ်တွင် တွေ့ရသည့် ဆီးရီးယားကလေးငယ်တစ်ဦး ။ (မတ်လ 27 ရက်၊ 2015 ခုနှစ်)
အယ်ဒီတာ့အာဘော် ဓာတ်ပုံ- Yasin Akgül
(၃) အေးချမ်းစွာရေချိုးရခြင်းနှင့် စစ်အတွင်းရေချိုးရခြင်း
အသက် ၃၀ အရွယ် Salem Saoody သည် ၎င်း၏သမီး Layan (ဘယ်ဘက်) နှင့် တူမလေး Shaymaa5(ညာဘက်) အား အစ္စရေးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအပြီးတွင် ပျက်စီးသွားသော ရေချိုးကန်ဖြစ်သည့် ၎င်းတို့၏အိမ်မှ တစ်လုံးတည်းသောကျန်အစိတ်အပိုင်းတွင် ရေချိုး ပေးနေပုံ ။ (2015၊ ဂါဇာ)
အယ်ဒီတာ့အာဘော် ဓာတ်ပုံ- Wissam Nassar
၂၀၁၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၆ ရက်က Ukhiya တွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသို့ ထွက်ပြေးရောက်ရှိလာသည့် အသစ်ရောက်ရှိလာသော ဒုက္ခသည်မိန်းကလေးငယ်တစ်ဦးပါ။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသို့ ထွက်ပြေးသွားသည့် ရိုဟင်ဂျာများ၏ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သည် ကလေးငယ်များနှင့်အတူ အသက် ၁၈ နှစ်အောက် အများစုဖြစ်ပြီးယာယီတဲများအတွင်းသို့ ရောက်ရှိခဲ့ကြကပါတယ်။ မိသားစုဝင်တွေ သေဆုံးပြီး နေအိမ်တွေ မီးလောင်သွားတာကို တွေ့ရတော့ အရမ်းစိတ်ထိခိုက်ခဲ့ကြရမှာပါ။
အယ်ဒီတာ့အာဘော် ဓာတ်ပုံ- K.M Asad
(၅) ပုလဲနားကပ်နဲ့ ဒဏ်ရာရနေတဲ့ မိန်းကလေး
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၁ ရက်၊ ၂၀၁၈၊ မြို့တော် Damascus မြို့ဆင်ခြေဖုံးရှိ Eastern Ghouta ဒေသတွင် ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ဒဏ်ရာရရှိထားသော ဆီးရီးယားမိန်းကလေးတစ်ဦးဟာ Kafr Batna ရှိ ယာယီဆေးရုံတွင် ဆေးကုသမှုခံယူနေရပါတယ်။
အယ်ဒီတာ့အာဘော် ဓာတ်ပုံ – Ammar Suleiman
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၇ ရက်က တောင်ဆူဒန်နိုင်ငံ၊ ယမ်ဘီယိုမြို့တွင် လွတ်မြောက်လာသူ ကလေးစစ်သားများ မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက် တန်းစီစောင့်ဆိုင်းနေစဉ် ။ ကလေးစစ်သား ၈၇ ဦးအပါအဝင် တောင်ဆူဒန် စစ်ဘေးသင့်ဒေသ Yambio တွင် လူ ၃၀၀ ကျော်ကို ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းတို့အား လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်း ပြန်လည်ပေါင်းစည်းရန် ကူညီမည့် အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ကုလသမဂ္ဂမှ ဖေဖော်ဝါရီ ၇ ရက်၊ ၂၀၁၈ တွင် ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အယ်ဒီတာ့အာဘော် ဓာတ်ပုံ- Stefanie Glinski
Ain al-Arab ဟုလည်းသိကြသည့် ဆီးရီးယားနိုင်ငံ Kobane မြို့ရှိ ကျောင်းအပြင်ဘက် ပျက်စီးနေသော တံတိုင်းကို ဖြတ်ကျော်ဖြတ်သွားသည့် ဆီးရီးယားကျောင်းသူလေးတစ်ဦး။(မတ်လ ၂၅ ရက်၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ်) ။ ISIS တိုက်ခိုက်ရေးသမားများကို ကာ့ဒ်နှင့် မဟာမိတ်များက ဇန်နဝါရီ ၂၆ ရက်တွင် Kobane မှ နှင်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
(၈) Children Are Children First – Swings
မွတ်စ်လင်မ်များ၏ 2017 ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့တွင် Eid al-Adha အားလပ်ရက် တတိယနေ့ကို ဆင်နွှဲနေစဉ် ဒမတ်စကတ်မြို့အရှေ့ဘက်ရှိ Douma မြို့ပြင်ရှိ ပျက်စီးသွားသော အဆောက်အအုံတစ်ခုတွင် ဆီးရီးယားကလေးငယ်တစ်ဦး ဆော့ကစားနေတာဖြစ်ပါတယ်။
အယ်ဒီတာ့အာဘော် ဓာတ်ပုံ- Amer Almohibany
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ Dakka အနီးရှိ Fatullah အုတ်စက်ရုံမှ ကလေးငယ်များဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့သယ်လာတဲ့ အုတ်တစ်ထောင်တိုင်းအတွက် 0.9 USD နဲ့ညီမျှတယ်။
ကလေးလုပ်သားနှစ်ဦး၎င်းတို့အလုပ်လုပ်နေသည့် စက်ရုံတွင် ခေတ္တအနားယူစဉ် နေ့လယ်စာ စားကြပုံ ။ ဒါကာ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်။
အသက်5နှစ်အရွယ် Noha Abu Mesleh ကို ဂါဇာကမ်းမြောင်အလယ်ပိုင်းရှိ Nuseirat ဒုက္ခသည်စခန်းရှိ သူမ၏နေအိမ်အတွင်း၌ မြင်တွေ့ရပုံ။
ကင်မရွန်းနိုင်ငံ၊ Far North Region၊ Mora ရှိ ခရိုင်ဆေးရုံ၏ အထူးကြပ်မတ်ကုသဆောင်တွင် တွေ့ရသောကလေးနှင့်အတူ ဖခင်တစ်ဦး။ အာဖရိကကလေးများတွင် အဖြစ်များဆုံးရောဂါများမှာ ငှက်ဖျား၊ ဝမ်းပျက်ခြင်းနှင့် အာဟာရချို့တဲ့ခြင်း တို့ဖြစ်ပါတယ်။ (ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၊ ၂၀၁၉)
အယ်ဒီတာ့အာဘော် ဓာတ်ပုံ : Pierre-Yves Bernard/MSF
(၁၃) Children Are Children First – Skiing
ကလေးများသည် အဆုံးမဲ့စစ်ပွဲ၏ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သောရလဒ်ကို ခံနေကြရပါတယ်။ ပြီးခဲ့သောနှစ်တွင် မိသားစုတစ်စုတည်းမှ ကလေး ၁၀ ဦး ကျောင်းသို့ လမ်းလျှောက်လာစဉ် အာဖဂန်နစ္စတန်တွင် မပေါက်ကွဲသေးသော မော်တာဗုံးတစ်လုံးကို တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ ဒါဟာတာလီဘန်များနှင့် အမေရိကန် ကျောထောက်နောက်ခံပြု အမျိုးသားတပ်များကြား စစ်ပွဲများ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသည့် အာဖဂန်နစ္စတန်တွင် တွေ့နေကျမြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါက အန္တရာယ်တွေဆိုတာ မသိလိုက်ဘဲ စပ်စုတဲ့ ကလေးတွေက ဗုံးကို ကောက်ကိုင်ပြီး အဒေါ်ကို ပြဖို့ ယူသွားပါတယ်။ ပြီးတော့ ပေါက်ကွဲသွားတယ်။ ကလေး သုံးဦးနှင့် အရွယ်ရောက်သူအချို့ သေဆုံးခဲ့ပြီး ကျန်ခုနစ်ဦးမှာ အနည်းဆုံး ကိုယ်လက်အင်္ဂါ တစ်ခုစီ ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။
အယ်ဒီတာ့အာဘော် ဓာတ်ပုံ- Noorullah Shirzada
ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်မိခင်နှင့်ကလေးတစ်ဦး မြန်မာနိုင်ငံမှ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသို့ ထွက်ခွာခဲ့ပါတယ် ။ UNHCR ၏ အဆိုအရ ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည် ၇၂၀,၀၀၀ ကျော်သည် မြန်မာနိုင်ငံမှ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ကာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံသို့ ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်လာခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
အယ်ဒီတာ့အာဘော် ဓာတ်ပုံ- K.M. Asad
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်-မြန်မာနယ်စပ်ရှိ Shah Porir Dip ကျွန်း Teknaf (ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ စက်တင်ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၇)။ အနီးဆုံးကမ်းခြေသို့ လှေဖြင့်ရောက်ရှိလာသည့် သားငယ်ကိုပွေ့ချီလာသော ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်အမျိုးသမီးတစ်ဦး။
အယ်ဒီတာ့အာဘော် ဓာတ်ပုံ- KM Asad
(၁၆) Children Are Children First – Balloons
ဆီးရီးယားနိုင်ငံ မြို့တော် ဒမတ်စကတ်၏ အရှေ့ဘက် ဆင်ခြေဖုံးရှိ Jobar ရပ်ကွက်ရှိ အပြင်းအထန် ပျက်စီးနေသော အဆောက်အအုံများကို မီးပုံးပျံများဖြင့် ပြေးလွှား ကစားနေသည့် ဆီးရီးယား ကလေးငယ်များ(ဧပြီ ၉ ရက်၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်)
(၁၇) လူစွမ်းကောင်းတိုင်းမှာ ဝတ်ရုံမပါပါဘူး
သူပုန်များထိန်းချုပ်ထားသည့် အလက်ပိုမြို့ မြောက်ပိုင်းရှိ Salihin ရပ်ကွက်တွင် စက်တင်ဘာ ၁၁ ရက်က လေကြောင်းမှ တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခု ဖြစ်ပွားပြီးနောက် ပျက်စီးသွားသော အဆောက်အအုံအပျက်အစီးများ ကြားမှ ကလေးငယ်ကို သယ်ဆောင်လာသည့် ဆီးရီးယားအမျိုးသား(စက်တင်ဘာ ၁၁ ရက်)
အယ်ဒီတာ့အာဘော် ဓာတ်ပုံ- Ameer Alhalbi
(၁၈) အနီရောင်နုတ်ခမ်းနီ ၊ သမုဒ္ဒရာမျက်ဝန်း
သူမက Rosina ဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတွင် အသက် ၁၄ နှစ်အရွယ် လိင်လုပ်သားတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်
အယ်ဒီတာ့အာဘော်ဓာတ်ပုံ- GMB Akash
(၁၉) အခွင့်အရေး တန်းစီနေခြင်း
2014 ခုနှစ်တွင် ဂါဇာကမ်းမြောင်အလယ်ပိုင်းရှိ Dair Al Balah ဒုက္ခသည်စခန်းရှိ အများပြည်သူသုံး ပိုက်ခေါင်းများမှ သောက်ရေသန့်ဘူးများနှင့် ပုလင်းများဖြည့်ရန် စောင့်ဆိုင်းနေသော ပါလက်စတိုင်းကလေးများ။
(၂၀) မိန်းကလေးတိုင်း ကျောင်းမတက်နိုင်
ပါကစ္စတန် မိန်းကလေးများ ကျောင်းတက်ခြင်းကို တာလီဘန်တို့က နှစ်ကြိမ်တိုင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ (Nowshera၊ Khyber Pakhtunkhwa၊ Pakistan၊ 2013)
အယ်ဒီတာ့အာဘော် ဓာတ်ပုံ- Diego Ibarra Sanchez